काठमाडौं । बजारमा ३१ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य कति हुन्छ ? अनि बजारमा १० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ ? वाणिज्य बैंकहरुमा हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको एनएमबि बैंकको शेयर ३९१ रुपैंयामा समायोजन भयो । उता सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको सिभिल बैंकको मूल्य १३५ रुपैंयाको हाराहारीमा...